Gaas :Haweenka 30% ayay ku leeyihiin Dowladda cusub | Gedoonline
Gaas :Haweenka 30% ayay ku leeyihiin Dowladda cusub	Added by Editor on July 17, 2012.Saved under Latest News	MUQDISHO(GMN)-Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta oo Talaada ah ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabiyeen qurba joog Soomaaliyeed.
Cabdiwali Gaas ayaa sheegay in haweenka ay yihiin laf dhabarta Bulshadda isla markaana dagaaladii ka dhacay dalka ay dhibaato soo gaartay.
Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa doorka ay haween ku leeyihiin Dowladda cusub ee la filayo in loo dhiso Soomaaliya.
Sheekh Axmed Dhicsow oo ka mid ahaa dadkii lagu marti qaaday kulanka ayaa sheegay in diinta Islaamka ay ogoshay in haweenka ay hogaan qabtaan.
Dhicisow ayaa hoosta ka xariiqay in haweenka ay u qalmaan in 60% ay mudan yihiin door muuqdana ay ku leeyihiin Bulshadda Soomaaliyeed.
Raysal-Wasaare Gaas Oo La Kulmay Bulshada Rayidka Ah.
Dr Gaas Oo Odayaasha La kulmay.
Gaas Oo Kulamo Laqaadanaya Madaxda Safaaradaha Caalamka Ee Kenya.